1.Kuyini iTestosterone phenylpropionate? Isebenza kanjani?
I-testosterone yi-hormone yesilisa eyenzeka ngokwemvelo emzimbeni womuntu. I-hormone ikhiqizwa ikakhulukazi emadodeni ngamasende. Le hormone idlala indima ebalulekile ekwandiseni ukubukeka komuntu kanye nentuthuko yezocansi. Izinhlamvu zamadoda, ezifana ne-bone mass, izicubu, ukukhiqizwa kwesidoda, kanye nokushayela kocansi, zonke zivuselelwa yi-testosterone. Kodwa-ke, ukukhiqizwa kwe-testosterone kwehla njengonyaka owodwa. Ngakolunye uhlangothi, i-testosterone yi-anabolic steroid efakwa emzimbeni ukusiza ekwakheni izicubu zomzimba kanye nasekuthuthukiseni ezinye izici zesilisa. Noma ngubani ohlushwa amazinga aphansi e-testosterone ubuye weluleke ukuthi athathe i-testosterone asize ekwenzeni ngcono ukwenziwa kwehomoni yemvelo emzimbeni.
I-Testosterone phenylpropionate (I-1255-49-8) yi-anabolic steroid esetshenziswa ngabantu abahlushwa yimiphumela yamazinga aphansi e-testosterone. Ukuntuleka kwe-testosterone eyanele emzimbeni kungaholela ezinkingeni ezahlukahlukene zezempilo ezifana ne-libido ephansi, amazinga wesidoda aphansi, futhi kungabambezela ukuthuthukiswa kwezimpawu zobudoda njengezwi elijulile, izindebe, noma izicubu zomzimba ngesikhathi sokukhula. Uma ufuna umuthi ozokusiza ekwakheni izicubu zomzimba futhi ufeze izinhloso zakho njengomsubathi, khona-ke i-testosterone phenylpropionate kuzoba isengezo esihle kakhulu. Le anabolic steroid iletha imiphumela yekhwalithi inqobo nje uma ulandela imiyalo yemithamo.
Imvamisa, abakhiqizi be-testosterone banamathisela umuthi ngama-esters ahlukene ukubenza bakwazi ukuhlala bekhuthele emzimbeni isikhathi eside. I-Phenylpropionate ingelinye lama-esters ajwayelekile anamathele kwi-testosterone yokwelula impilo esebenzayo yesidakamizwa aze afike cishe ezinsukwini ze-4. Abakhi bomzimba kanye nabasubathi baphakathi kwabasebenzisi abasebenza kakhulu be-testosterone phenylpropionate emhlabeni. Umuthi ubasiza ukuba bakhulise amandla omzimba wonke, bakhe izicubu, futhi futhi bathuthukise nokuqina kwezocansi. Kodwa-ke, njengaxa usebenzisa amanye ama-steroid, kungakuhle ukuthi uhlale uyokuhlolwa udokotela ngaphambi kokuqala ukuthatha lo muthi. I-testosterone phenylpropionate isebenzisa ingahlukahluka kuye ngomuntu ngamunye.
Isebenza kanjani i-Testosterone phenylpropionate?
I-Testosterone phenylpropionate (1255-49-8) njengamanye ama-anabolic steroid avusa umzimba wakho ukuthi ukhiqize ama-testosterone amaningi ama-hormone. Umuthi uqinisekisa ukuthi umzimba wakho unamazinga anele futhi agxilile e-testosterone hormone. Lapho la mazinga e-hormone besilisa esanele ohlelweni lwakho lomzimba, uzoqala ukujabulela izinzuzo, futhi ungafinyelela kalula izinhloso zakho zomsebenzi. I-hormone futhi inesibopho sokuqinisa ukulahleka kwamafutha, ukugcina izicubu zemisipha, nokukuvikela kwi-Osteoporosis.
Kunoma yimuphi owakha umzimba, izicubu zomzimba namandla omzimba kubalulekile ekusebenzeni kangcono ekuqeqesheni nasemincintiswaneni. I-testosterone i-hormone isiza futhi ekuvuseleleni izicubu ngemuva kokuzivocavoca okusindayo kakhulu ngesikhathi semijikelezo enobunzima. Lawa ma-hormone abopha i-Androgen Receptors (AR) ukusheshisa ukulahleka kwamafutha nokukhula kwemisipha kanye nokulungiswa. Noma kunjalo, ukuthola imiphumela engcono ye-testosterone phenylpropionate, kufanele uhambisane nomthamo ngokudla okufanele nokuqeqeshwa. Yazisa umqeqeshi wakho nomondli wezempilo uma uqala ukuthatha umthamo we-testosterone phenylpropionate. Thintana nodokotela wakho ngokushesha lapho ubona noma yimiphi imiphumela emibi kakhulu ukuze uvikele ezinye izinkinga zempilo.
2.Umjikelezo we-testosterone phenylpropionate
I-testosterone phenylpropionate kufanele iphathwe cishe ngamaviki we-6 kuya kuma-8, ngokuya ngalokho okudingeka ukukufeza ekupheleni komjikelezo. Udokotela wakho naye uzoklama okuhle kakhulu testosterone umjikelezo we-phenylpropionate ngawe ngemuva kokuhlola isimo sakho sokwelashwa. Kwesinye isikhathi udokotela angayiqinisa isikhathi umthamo noma anciphise. Ukuhlolwa okujwayelekile kwezokwelapha kuzobaluleka ukuqapha inqubo yemithi phakathi komjikelezo. I-testosterone phenylpropionate ingasetshenziswa yodwa phakathi nomjikelezo noma namanye ama-anabolic steroid ukuthola imiphumela engcono. Noma kunjalo, ungahlanganisi izidakamizwa ngaphandle kokubonisana nomuthi wakho.
Wabasaqalayo belulekwa ukuthi baqale ngemithamo ephansi nemijikelezo emifushane, engashintshwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthola imiphumela engcono. Abasebenzisi abasezingeni eliphakeme be-testosterone phenylpropionate bangabambelela esikhathini esiphezulu samaviki e-8 noma ngaphezulu. Musa ukunciphisa noma ukwandisa umjikelezo we-testosterone phenylpropionate, uma udokotela engakuyalanga ukuthi wenze njalo. Kwesinye isikhathi izindondo zingamisa umjikelezo maphakathi uma uhlangabezana nemiphumela emibi kakhulu engaholela ezinkingeni zempilo. Imizimba yabantu isabela ngendlela ehlukile ngezidakamizwa ezahlukahlukene; Ngakho-ke, akukhona okuzenzakalelayo ukuthi umuthi uzokusebenzela njengoba ufisa.
3.Imiphumela ye-testosterone phenylpropionate
I-Testosterone phenylpropionate (1255-49-8), uma isetshenziswa ngendlela efanele, uletha imiphumela emihle futhi ekugcineni uzokusiza ukufezekisa izinhloso zakho. Ngakho-ke, umthamo ofanele, ukudla, nokusebenzisa kahle kuzokuqinisekisa imiphumela yekhwalithi. Nayi eminye yemiphumela evamile ye-testosterone phenylpropionate;
Ukukhula kwemisipha, esinye sezizathu zokuthi kungani kufanele uthathe ukuthatha i-Testosterone phenylpropionate njengezakhi zomzimba yingoba kuyasiza ekuqiniseni ukukhula kwemisipha. Imisipha idlala indima ebalulekile empilweni yomakhi womzimba futhi ufeze ukuthi udinga ukuthatha ama-steroid afanele ukuthuthukisa ukuthuthukiswa kwemisipha. Wonke umuntu owakha umzimba noma umsubathi ufisa ukuba nemisipha enciphile, engatholwa ngokuthatha lesi sidakamizwa esinamandla.
Ukushisa amafutha, imijikelezo yokusika nakho kubalulekile ngoba kusiza ukuqeda amafutha athe xaxa emzimbeni. I-testosterone phenylpropionate iyisithako esinamandla kakhulu sokusika njengoba ikhulisa imetabolism, okuholela ekushisweni ngokushesha kwamafutha omzimba. Ungasebenzisa umuthi uwedwa noma uhlangane namanye ama-anabolic steroid azosheshisa inqubo yokushisa amafutha.
Ukuvuselelwa kabusha kwemisipha okusheshayo, ukusebenzisa kungaba nezikhathi eziningi ukwelula izicubu zakho ngenxa yokuphakamisa izinsimbi ejimini. Ubuhlungu obabuthola ngemuva kwalokho bungaphazamisa ukuqeqeshwa kwakho futhi kwesinye isikhathi kungenza kube nzima ngawe ukuqhubeka nalo mkhuba. Kodwa-ke, lapho uthatha i-testosterone phenylpropionate, lokho kufanele kube okungenani kokukhathazeka kwakho ngoba umuthi uthuthukisa inqubo yokupholisa izicubu. Imisipha yakho izohlala iphola ngokushesha ukuvumela ukuthi usebenze nsuku zonke futhi wenze kube lula ukuthi uthole imiphumela oyifunayo.
Ukwanda kokuqina komzimba, ukuntuleka kwamandla anele ukusebenzela ukuncintisana ngempumelelo kuhlale kuyinselelo enkulu ababakhi abaningi bomzimba ababhekana nayo emugqeni wabo wokusebenza. I-testosterone phenylpropionate izothuthukisa amazinga akho wamandla ukukuvumela ukuba uqeqeshe amahora amaningi futhi ufeze izinhloso zakho ngokushesha.
Ukuqiniswa kohlelo lwamathambo, i-osteoporosis kuyinselele abantu abaningi ababhekene nayo, futhi lo muthi uyasiza ekulweni nalesi sifo samathambo. I-testosterone phenylpropionate izothuthukisa impilo yesistimu yakho. Sekuyiminyaka eminingi manje, abezempilo bezisebenzisa lesi sidakamizwa ukusiza iziguli zamathambo. Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-testosterone phenylpropionate ingenye yemithi enamandla kakhulu yokulwa nokulahleka kokuqina kwamathambo.
Thuthukisa i-sex drive kanye nesifiso sokudla; amazinga e-testosterone athuthukisiwe azothuthukisa ngokuzenzakalela i-libido yakho. Ngakolunye uhlangothi, isifiso sakho sokudla sizothuthukiswa. Ngakho-ke, lokhu kwenza i-testosterone phenylpropionate ibe ngumkhiqizo omuhle kakhulu kubo bobabili abakhi bomzimba kanye nabantu abazabalaza nge-low sex drive. Emijikelezweni exakayo, isifiso sakho sokudla siyothuthukiswa futhi senze kube lula ngawe ukufeza izinhloso ozifisayo.
Imiphumela emibi ye-testosterone phenylpropionate
Njenganoma yisiphi esinye isidakamizwa, i-testosterone phenylpropionate (1255-49-8) futhi inecala layo elitholwa kakhulu ngabasebenzisi abalisebenzisa kabi. Kufanele njalo ulandele imiyalo yemithamo uma ufuna ukunciphisa le miphumela emibi. Kodwa-ke, ngenxa yokuxaka kwemizimba yabantu, abanye abantu bangathola imiphumela emibi ngisho nangemva kokuthatha umthamo ofanele, kepha odokotela bangakulawula lokho. Eminye yemiphumela emibi ye-testosterone phenylpropionate ifaka phakathi;
Umuthi ungadala izinduna nemithambo emzimbeni wakho
Kungaholela ekucindezelweni okuphezulu
Ungathola futhi i-hypertrophy ye-prostate
Kungadala ukuvuna kwabanye abasebenzisi
Ngaphezu kwalokho, kunemiphumela emincane ethile ongezwa ngayo, eyanyamalala ezinsukwini ezimbalwa. Kubandakanya, ukulunywa nokuvuvukala okuzungezile kwendawo yomjovo, kepha uma kuba kubi ngokwendlela obekulindelwe ngayo, udokotela wakho uzokusiza ekutholeni ikhambi elifanele. Izindaba ezimnandi ukuthi iningi lemiphumela emibi ye-Testosterone phenylpropionate ingalawulwa uma wazisa udokotela wakho ngesikhathi. Musa ukuqhubeka nokuthatha umuthi uma uhlangabezana nanoma yimiphi imiphumela engenhla ngaphandle kwemvume kadokotela wakho. Kwesinye isikhathi kungaba nzima ukuhlehlisa imiphumela ebuhlungu uma umuthi uqala sekwephuze kakhulu.
4.Isilinganiso se-Testosterone phenylpropionate
Umthamo ofanele uhlala uqinisekisa imiphumela yekhwalithi nangesikhathi esifanele. Okunconyiwe umthamo we-testosterone phenylpropionate isukela ku-100-200 mg okufanele ithathwe kanye njalo ezinsukwini ezintathu. Kwabasebenzisi abasha, kungakuhle ukuthi uqale ngemithamo ephansi kumjikelezo wokuqala emva kwalokho ingashintshwa kwimijikelezo elandelayo. Umthamo kufanele uphathwe ngomjovo kanye nangokomzimba. Imvamisa, udinga ukuthatha umuthi cishe amasonto ama-6-8. Kodwa-ke, lokhu kungaguqulwa ngokuya ngokuthi umzimba wakho uhlangana kanjani ne-testosterone phenylpropionate. Wena dokotela ungakweluleka ukuthi uqale ngemithamo ephansi kunama-100mgs ngezinsuku ze-3, ngemuva kokuhlola isimo sakho sokwelashwa. Amantombazane ayelulekwa futhi ukuthi athathe umthamo ophansi we-testosterone phenylpropionate ukugwema ukuthuthukisa izici zobudoda.
Ngakolunye uhlangothi, abakhi abaphambili bomzimba noma abasubathi ama-200mgs ngezinsuku ze-3 kuzoba yidosi ephelele yokufeza izinhloso ozifisayo. Ngemiphumela engcono njalo ihambisana nomthamo wakho ngokudla okufanele kanye nokusebenza kakhulu uma ufuna ukwakha izicubu noma lapho usika imijikelezo. Lesi sidakamizwa singasetshenziswa eceleni kwamanye ama-anabolic steroid, kepha futhi sinikeza imiphumela yekhwalithi uma isetshenziswa yodwa. Ngemijikelezo emikhulu, ungadinga ukufaka i-testosterone phenylpropionate namanye ama-steroid kepha ubandakanye nodokotela wakho ukukusiza ekuhlanganiseni okuhle kakhulu. Futhi, khumbula ukulandela yonke imiyalo yemithamo ngoba ukweqisa ngokweqile kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu.
5.I-testosterone phenylpropionate isigamu sempilo
I-testosterone phenylpropionate inempilo esebenzayo cishe ye-4 kuya ezinsukwini ze-5 uma isingeniswe ohlelweni lwakho lomzimba. Ngakho-ke, umuthi kufanele uphuzwe kanye ezinsukwini ezintathu noma kabili ngesonto ukuze uqhubeke nokuhlinzekwa okuqinile kwe-testosterone hormone emzimbeni wakho. Lokhu kwenza i-testosterone phenylpropionate i-anabolic steroid ephelele yabakhi bomzimba abaningi ngenxa yempilo yayo ende esebenzayo. Kukhona nesikhathi esanele sendawo yakho yomjovo yokwelapha ngaphambi kokuthatha umthamo olandelayo. Khumbula, i-testosterone futhi yandisa inqubo yokupholisa izicubu, ngakho-ke lesi sidakamizwa sisebenza njengesengezo esihle kakhulu kunoma yimuphi umsubathi noma umakhi womzimba.
6.I-testosterone phenylpropionate yokusika
I-Testosterone phenylpropionate powder kwenza isengezo esihle ngemijikelezo yokusika. Ukuhlinzekwa okuqinile kwale hormone testosterone kukhulisa imetabolism okugcina kusiza ekwehliseni amafutha omzimba. Njengomakhi womzimba, kufanele udlule kumjikelezo wokusika ukuze ukhiphe amafutha omzimba angakuvimba ekufinyeleleni izinhloso zakho. Amafutha omzimba afakwa ngaphansi kwesikhumba futhi angenza kube nzima ngawe ukuthuthukisa izicubu ezisezingeni nezikhanyayo ezibonakalayo. Sekuyiminyaka eminingi manje, izinkulungwane zabasubathi bezisebenzisa umjikelezo wokusika nowokuxinana.
Ungahlanganisa i-testosterone phenylpropionate namanye ama-anabolic steroid angcono kakhulu wokusika imijikelezo efana neWinstrol, Anavar noma i-trenbolone ngemiphumela engcono. Ngokuya ngesimo sakho samanje nokuthi yini ofuna ukuyifinyelela, umuthi wakho uzokusiza ekutholeni umthamo ofanele wokusika ukukusiza ekutholeni izicubu zomzimba njengoba usika amafutha omzimba angafuneki. Ukuze uthuthukise ukubukeka komzimba wakho njengomsubathi noma i-bodybuilder, khona-ke kufanele uhambisane nomthamo we-Testosterone phenylpropionate wokudla ngokudla okufanele kanye nokuzivocavoca.
7.I-testosterone phenylpropionate yobuningi
Lapha unenhloso eyodwa kuphela, okuwukuthola ubunzima bemisipha ngesikhathi esifushane kakhulu. Abakhi bomzimba bavame ukuqala ngomjikelezo wobuningi, obese ulandelwa umjikelezo wokusika. Abakhiqizi abathuthukisiwe bomzimba baphinde bangene umjikelezo wokuxineka njalo ukuthola nokugcina amazinga e-mushi esindayo. I-testosterone phenylpropionate ingenye yama-anabologi asetshenziswa kakhulu kwimijikelezo exubing. Kodwa-ke, abanye abasubathi bakhetha ukukunamathisela nezinye izidakamizwa ukusheshisa imiphumela. Imijikelezo ene-bulking ibandakanya ukusebenzisa kanzima okungaselula imisipha yakho kuze kube semkhawulweni, futhi uma ungenazo izithasiselo ezifanele njenge-testosterone phenylpropionate, ungaba nezinhlungu ezinzima.
Le anabolic steroid ikhuthaza ukukhula kwemisipha futhi isheshise inqubo yokupholisa izicubu. Ngakho-ke, lapho uthatha yakho testosterone phenylpropionate for bulking, uzoba nesiqiniseko sokutholwa kwemisipha eminingi futhi usheshe uthole izicubu. Umuthi futhi une-ester ende, ehumusha impilo ende esebenzayo, ngakho-ke uzobe ujova umthamo kabili ngesonto. Ngakho-ke, ukuvumela izindawo zomjovo ukuthi zelaphe ngaphambi kokuya kumthamo olandelayo. Udokotela wakho, umondli wezempilo, kanye nomqeqeshi kufanele akuqondise kuyo yonke inqubo. Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi bayazi izinhloso zakho ngokwengeziwe lapho uqala imijikelezo eminingi noma yokusika ukuthola isiqondiso esifanele.
8.Izinzuzo ze-Testosterone phenylpropionate
I-testosterone phenylpropionate inikeza izinzuzo ezahlukahlukene kubasebenzisi abazisebenzisa ngendlela efanele futhi balandele imiyalo yemithamo. Njenganoma iyiphi enye i-anabolic steroid, kufanele ulandele imiyalo yokusebenzisa enikezwe umenzi we-testosterone phenylpropionate kanye nomuthi wakho ukuze ujabulele lezi zinzuzo. Lesi sidakamizwa sesibonakalise ukuthi siwusizo emikhakheni yezemidlalo nakwezokwelapha. Ukubheka ukubuyekezwa okuhlukahlukene kwe-testosterone phenylpropionate, uzokwazi ukuthi abasebenzisi abaningi bajabule futhi bazwakalisa ukwaneliseka kwabo ngemuva kokusebenzisa le-anabolic steroid enamandla. Ezinye izinzuzo ezivelele kakhulu ze-testosterone phenylpropionate zifaka:
Konke Okudingeka Ukwazi Ngo-Anavar (Oxandrolone) ye-Bodybuilding(Ivula kuthebhu entsha yesiphequluli)
Impilo ende esebenzayo
Ingxenye engcono kakhulu yokusebenzisa i-testosterone phenylpropionate (1255-49-8) wukuthi uzodinga kuphela ukuthatha imithamo yakho kabili ngesonto. Lokho kwenza le anabolic steroid ibe ngenye yezidakamizwa ezikhethwa kakhulu ngabakhi bomzimba nabasubathi. I-testosterone phenylpropionate ihlala isebenza ohlelweni lomzimba wakho cishe izinsuku ezingama-4 kuya ezinsukwini ze-5, enikeza izindawo zakho zomjovo isikhathi esanele sokuphulukisa ngaphambi kokuthatha umthamo olandelayo.
Ihambisa imiphumela yekhwalithi ngesikhathi esifushane
I-testosterone phenylpropionate iphakathi kwama-anabolic steroid asheshayo asemakethe namuhla. Uzothatha lo muthi okungenani amasonto e-8, futhi uzothola izinhloso zakho noma ngabe uwusebenzisa ngemijikelezo yokusika noma yokuxhaphaza. Yize udokotela wakho ekwazi ukwelula imijikelezo ngokuya ngezinhloso zakho noma ngentuthuko ngemuva kokuthatha umuthi, usenomunye wemijikelezo yomthamo omfushane kakhulu emhlabeni wama-anabolic steroid.
Igqamisa ukusebenza kwakho
Njengomsubathi noma umakhi womzimba, udinga amandla namandla omzimba ukufeza izinhloso zakho zomsebenzi. I-testosterone phenylpropionate ithuthukisa ukusebenza kwakho jikelele ekuqeqeshweni nasekuncintisaneni. Ngakolunye uhlangothi, lesi sidakamizwa sidlala indima ebalulekile ekusizeni abasubathi nabakhi bomzimba ukukhulula izinhlungu zemisipha nokukhathala ngemuva kokuzivocavoca noma phakathi nemincintiswano. Kufanele uqinisekise ukuthi ulandela yonke imiyalo yemithamo ukuze ujabulele imiphumela yekhwalithi. Ngesikhathi uqeda umjikelezo wakho we-testosterone phenylpropionate, uzobe usuqhakambisile amandla okukuyisa ngemincintiswano nangokuziqeqesha.
Ukwelashwa kwayo yonke imiphumela yokuntuleka kwe-testosterone
Emhlabeni wezokwelapha, odokotela basebenzisa i-testosterone phenylpropionate ukwelapha iziguli ezinemiphumela ephansi ye-testosterone efana ne-low sex drive emadodeni, i-osteoporosis, phakathi kwezinye izifo. Amazinga aphansi we-testosterone, ikakhulukazi emadodeni, eza nezinkinga zezempilo ezahlukahlukene ezisetshenziselwa ukwelapha i-testosterone phenylpropionate. Isibonelo, lapho izici zobudoda zibambezeleka ukukhula, khona-ke lesi esinye sezidakamizwa ezikhethwa kakhulu ngabezokwelapha.
Imiphumela emincane emincane
Yize onke ama-anabolic steroid eza nemiphumela emibi ehlukahlukene, ukuthatha imithamo ye-Testosterone phenylpropionate kuzoveza imiphumela emincane kakhulu uma uyithatha kahle. Ingenye yama-anabolic steroid ambalwa emakethe anemiphumela emibi embalwa kakhulu. Okukhulu kwemiphumela emibi ye-Testosterone phenylpropionate kwenzeka kuphela kulabo abasebenzisa kabi umuthi. Uma nje unamathela kuyo yonke imiyalo yemithamo, ulungele ukuhamba, futhi uzokujabulela zonke izinzuzo ze-testosterone phenylpropionate.
9.Ukubuyekezwa kwe-testosterone phenylpropionate
Imvamisa, amakhasimende amaningi aveza imibono yawo ngomkhiqizo othile ngezibuyekezo nezilinganiso. Njengayo eminye imikhiqizo yezokwelapha, i-testosterone phenylpropionate ibilokhu ithola impendulo ehlukile evela kubasebenzisi abahlukahlukene. Iningi labasebenzisi linelisekile ngemiphumela elethwe yilesi sidakamizwa kakhulu emidlalweni yezemidlalo lapho abasubathi kanye nabakhi bomzimba besisebenzisa ukubasiza bafinyelele izinhloso zabo zomsebenzi. Kwabasubathi, umuthi usize abaningi ukuthola izicubu zemisipha ngesikhathi semijikelezo eningi nokushisa amafutha omzimba emijikelezweni yokusika.
Emhlabeni wezokwelapha, i-Testosterone phenylpropionate ithole ukukalwa okuhle nokubuyekezwa okuhle. Abezempilo babike ukuphumelela kwalesi sidakamizwa ekwelashweni kwemiphumela ephansi ye-testosterone kwabesilisa. Njengoba kushiwo ngaphambili kule ndatshana, amazinga aphansi e-testosterone angaholela ekushayelweni kocansi oluphansi, i-osteoporosis, kanye nokubambezeleka ekwakhiweni kwezimpawu zobudoda ezinjengokwanda kwezwi, intshebe, phakathi kwabanye. Izinkulungwane zeziguli zibuye zincome i-testosterone phenylpropionate ngemuva kokwelashwa okuphumelelayo kwezifo ezahlukahlukene.
I-10 i-Anabolic Steroids Raw powder eyaziwa kakhulu nge-2019(Ivula kuthebhu entsha yesiphequluli)
Futhi, abanye abasebenzisi bakhala ngokuthi banolwazi olubi kakhulu nge-testosterone phenylpropionate. Kodwa-ke, bathi isiphithiphithi sabo ukweqisa noma ukusebenzisa kabi i-testosterone phenylpropionate. Imizimba yabantu yehlukile, futhi akuwona wonke umuthi osebenzela umngani wakho ozosebenzela wena. Sihlala sicebisa bonke abasebenzisi bomkhiqizo ukuthi bahlolwe ngaphambi kokuqala ukuthatha imithamo. Kuhlale kungumbono omuhle ukufaka udokotela wakho kwinqubo yomthamo we-testosterone phenylpropionate ngolwazi olungcono.
10.I-testosterone phenylpropionate iyathengiswa
Kukhona abathengisi abaningi be-testosterone phenylpropionate abatholakala ku-inthanethi nasezitolo zomzimba emhlabeni jikelele. Noma kunjalo, udinga ukuqaphela kakhulu uma udinga ukuthola umuthi osezingeni eliphakeme ozokuqinisekisa imiphumela yekhwalithi ngokuphela kwemijikelezo yakho. Akuwona wonke umenzi we-testosterone phenylpropionate uthola online uyiqiniso, abanye bakhona ukwenza imali, futhi abanandaba nemiphumela oyothola ngemuva kokuthatha imithamo yakho. Ngaphambi kwakho thenga i-testosterone phenylpropionate, qala wenze ucwaningo lwakho. Qinisekisa ukuthi uqonda ukuthi umphakeli we-testosterone phenylpropionate usebenza kanjani ngaphambi kokuthi wenze noma imuphi i-oda. Funda izibuyekezo eziningi zamakhasimende kanye nokubheka izilinganiso zenkampani.
Singumhlinzeki ophambili we-testosterone phenylpropionate nomakhi esifundeni. Iwebhusayithi yethu iyasebenziseka kalula, ngakho-ke ungenza kalula i-oda lakho usebenzisa i-smartphone, ithebulethi, noma ideskithophu kusuka endaweni okuhlala kuyo noma ekhaya. Sihlala siqinisekisa ukuthi siletha yonke imikhiqizo ngesikhathi esifushane kunazo zonke. Ungakwazi uthenge i-testosterone phenylpropionate powder ngobuningi noma ngokwanele nje imijikelezo yakho yokusikisela noma yokusika. Khumbula, noma ungawuthola kalula kanjani umuthi, ungaqali ukuwuphuza ngaphandle kokuthola udokotela.
Ngaphandle kwalokho, sihlala sicebisa abathengi bethu abathembekile ukuthi baqonde okushiwo yimithetho ezweni labo ngokuthenga noma ukuba nanoma iyiphi i-anabolic steroid ngaphambi kokwenza i-oda epulatifomu yethu. Ngeke sithande ukufaka abathengi bethu enkingeni nabasebenza umthetho wokuthenga imikhiqizo yethu esezingeni. Qinisekisa nodokotela wakho ukuthi ngabe ikhona yini imikhawulo lapho uthenga i-testosterone phenylpropionate yokwakha umzimba. Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi lapho udinga ukwenza i-oda noma uma unezinkinga noma imibuzo ngemikhiqizo yethu. Abamele ideski lethu losizo bahlala bekulungele ukukusiza.
11.I-testosterone phenylpropionate vs Testosterone propionate yokwakha umzimba
Awukho umehluko obalulekile phakathi kwalezi zidakamizwa zombili njengoba zisebenza ngendlela efanayo. Bonke bangama-anabolic steroid, futhi babelana ngengxenye efanayo yokuphila cishe kwe-4 kuya ezinsukwini ze-5. Ungakhetha ukuthatha noma yikuphi kwalokhu okubili bese uthola imiphumela efanayo. Kokubili ama-testosterone phenylpropionate ne-testosterone propionate asetshenziswa abakhi bomzimba ukubasiza ekwakheni izicubu zomzimba nokusika imijikelezo. Le mishanguzo yathuthukisa amazinga e-testosterone emzimbeni emzimbeni, okuholela ekuphuculeni ukuhanjiswa kwesondo, ukukhula kwemisipha, kanye nokusikwa kwamafutha omzimba ngokweqile. Abasubathi abaningi basebenzisa noma isiphi lesi sidakamizwa-mbili ukukhulisa ukusebenza kwabo ngoba bandisa amandla omzimba okubenza bakwazi ukuncintisana ngempumelelo.
I-testosterone phenylpropionate ne-testosterone propionate bahluke kuphela kwizakhiwo zabo zamakhemikhali, kepha babelana ngobuningi bezimpawu. Imithamo yama-anabolic steroid amabili kufanele futhi ithathwe kabili ngesonto. Kodwa-ke, bonisana nodokotela wakho ngezidakamizwa okufanele uzisebenzise kanye nalezi ezimbili ukuthola imiphumela engcono. Ngeke kungenze mqondo ukuthatha bobabili I-Testosterone phenylpropionate kanye ne-testosterone propionate ngaphakathi komjikelezo ofanayo. Ukuthatha esisodwa ngesikhathi kuzozuzisa kakhulu, kepha qinisekisa nodokotela wakho ngaso sonke isikhathi. Ungawathenga womabili ama-anabolic steroid kuwebhusayithi yethu.
U-El Osta, R., Almont, T., okhuthazayo, uC., Hubert, N., Eschwège, P., & Hubert, J. (2016). Ukuhlukunyezwa kwe-steroid ye-Anabolic nokungazalwa kwabantu. I-andrology eyisisekelo nesemtholampilo, 26(1), i-2.
UTretzel, L., Thomas, A., Geyer, H., Gmeiner, G., Forsdahl, G., Pop, V.,… & Thevis, M. (2014). Ukusetshenziswa kwezindawo ezomile zegazi ekuqedweni kokuhlaziywa kokulawulwa kwama-estrogen e-anabolic. I-Journal yokuhlaziywa kwemithi kanye nezokwelapha, 96, I-21-30.
Bhawani, SA, Sulaiman, O., Hashim, R., kanye no-Ibrahim, MN (2010). Ukuhlaziywa kwe-chromatographic emincane ye-steroid: Ukubuyekezwa. I-Trrop Journal ye-Pharmaceutical Research, 9(3).
USolimini, R., Rotolo, uMc, uMastrobattista, uL., UMali, uC., UMututillo, u-A., uPichini, uS.,… noPalmi, Mina (2017). I-Hepatotoxicity ehambisana nokusetshenziswa okungemthetho kwama-anabolic androgenic steroid ekudunzini. I-Eur Rev Med Pharmacol Sci, 21(1 Suppl), i-7-16.